भट्टराई बाहुन जातिका अन्तिम प्रधानमन्त्री
[2011-09-05 오후 9:31:00]
कृपया तपाईंले यात्रा गर्दा आफ्नो सुरक्षाको ख्याल गर्नुहोस् । तपाईंले यात्रा गर्दा हवाई मार्गबाट बाटो पार गर्दा अझ वेश हुन्थ्यो कि सोच्नुस् अनि मात्र यात्रा गर्नुहोस् । यो कुरा गोप्य राख्नुहोस् उही साथी…......। २५ अगष्ट २०११ का दिन बिहान ५ बजेर ४५ मिनेट ४३ सेकेन्डको समयमा ९८४३०५११५५ नम्बरको मोबाइलबाट मलाई एउटा सन्देश आयो त्यो सन्देशले मलाई पूरै दिनभरिको यात्रामा झस्काई रह्यो र यो सन्देश पठाउने मान्छे को हो? मेरो शुभचिन्तक हो कि विरोधी हो मलाई त्यो सन्देश पठाउने मान्छे । किनकि मलाई यसभन्दा २५ दिन अगाडि प्रहरीहरुले पक्राउ गरी २४ दिनसम्म प्रहरी हिरासतमा राखी सन्देश आएको अघिल्लो दिन २४ अगष्टमा मात्रै प्रशासनको आदेशमा छुटेको थिएँ त्यो पनि धरौटी रकम राखेर । २५ अगष्टका दिन मैले लामो यात्रा पूरा गर्नुपर्ने थियो । किनकि मलाई राजधानी काठमाडौं पुग्न आवश्यक थियो । २४ अगष्टका दिन मेरा शुभचिन्तकहरुले मेरो राजधानीसम्म आउने सहज वातावरण मिलाउनका लागि हेलिकोप्टरको व्यवस्था पनि गरिसकेका थिए । तर मौसम खराब भएको कारण हेलिकोप्टरबाट मेरो यात्रा सहज भएन ।
१९ दिने लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछिको पहिलो प्रहरीको हिरासत बसाई नै मेरो यही थियो । मलाई मेरो अमेरिकामा श्रीमती रहेको र २ वटा छोरी भएको आरोप पनि लागेको थियो । जबकि म आजसम्म अविवाहित छु र कुनै पनि महिलासँग मेरो कुनै किसिमको सम्बन्ध छैन । १९ दिने लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछिको पहिलो प्रहरी हिरासतमा बसाई मेरो यही नै थियो । १९ दिने जनआन्दोलनभन्दा अगाडि धेरैपटक सेना र प्रहरीले पक्राउ गरेका थिए । २०५८ भाद्र २३ गते ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले मात्र मलाई राजद्रोहको अभियोगमा मुद्दा चलाएको थियो । २०६० साल मंसिर २ गते रामेछाप जिल्लाको बेतालीस्थित पलाते बजारबाट तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले पक्राउ गरी चरम शारीरिक र मानसिक यातना दिएको थियो । तर सेनाले मलाई मुद्दा नचलाई लामो समयसम्म हिरासत राखेर प्रहरीको जिम्मा लगाएर छोडिदियो एकजना जर्नेलको निर्देशनमा । १९ दिने जनआन्दोलनभन्दा अघि त मेरो जीवनमा यस्ता दर्जनौँ घटनाहरु घटेका थिए । तर म कुनै अपराधी थिइन । मात्र मैले सामन्ती राज्यसत्ताको स्वरुप र चरित्रको विरोध गरी परिवर्तनको माग गरेको थिएँ ।
नदिए खोस्ने सोच पनि बनाएको थिएँ । यस पटक प्रहरीले पक्राउ गरेपछि मैले एउटा कुरा बुझ्न पाएँ । त्यो के हो भने त्यस समयको प्रहरी प्रशासन र अहिलेको प्रहरी प्रशासनमा धेरै परिवर्तन भएको रहेछ । त्यस समयको प्रहरी प्रशासनले बोल्ने भाषा अति असभ्य र असहयोगी भावनाको हुन्थ्यो भने अहिलेको प्रहरी प्रशासनले बोल्ने भाषा अति सभ्य र भावना पनि सहयोगी भएको मैले पाएँ । त्यस समयको प्रहरी प्रशासन बयानमुखी थियो भने अहिलेको प्रहरी प्रशासन अनुसन्धानमुखी भएको मैले पाएँ । त्यस बेलाको प्रहरी प्रशासन सत्ता र राजनीतिक दलहरुप्रति बफादार रहेको हुन्थ्यो भने यस समयको प्रहरी प्रशासन राजनीतिक दल र सत्ताको नेतृत्वमा पुग्नेहरुले मुलुक बिगारेको हो भन्ने चेतनाको विकास भइसकेको र तिनीहरुप्रति आक्रोश व्यक्त गरेको मैले देखेँ ।
त्यस समयको प्रहरी प्रशासन सत्ताभक्ति रहेको हुन्थ्यो भने यस समयको प्रहरी प्रशासनमा रहेकाहरु देशभक्त रहेको मैले पाएँ । त्यसभन्दा पनि त्यहाँको प्रहरी प्रमुख र सरकारी वकिलको कुराले मलाई धेरै प्रभाव पार्‍यो । सरकारी वकिलको तपाईसँग जुन क्षमता छ त्यो देशका लागि प्रयोग गर्नुहोस् । यस समयको प्रहरी प्रशासनलाई शासक वर्गले स्रोत साधनले युक्त बनाउन नसके पनि उनीहरुको गुणस्तर क्षमतामा वृद्धि भएको मैले पाएँ । मलाई त्यहाँको प्रहरी प्रमुखले भनेको एउटा कुराले चसक्क घोचिरहेको छ त्यो के हो भने सम्बन्ध भनेको ठूलो मान्छेसँग मात्र होइन तल्लो तहका मान्छेसँग पनि बनाउनुपर्छ । यसकारण म अब तल्लो तहका मान्छेसँग पनि आफ्नो सम्बन्ध विस्तार गर्ने योजना बनाइरहेको छु । प्रहरीले पक्राउ गर्नुभन्दा अघि मैले एउटा कार्यक्रमको आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको थिएँ । कार्यक्रमपछि नेपालका ८० प्रतिशत मूलवासी मंगोल समुदायको एउटा शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी बनाउने योजना थियो ।
जुन पार्टीले विदेशी हिन्दू आर्यन आक्रमणकारी बाहुन-क्षेत्रीको हातमा रहेको सम्पूर्ण शासनसत्ता खोस्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने थियो । यसका लागि मैले साउनको पहिलो हप्तादेखि मंगोल समुदायका वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरु, प्रशासकहरु, सेना र प्रहरीमा रहेका मंगोल समुदायका वरिष्ठ अधिकृतहरुसँग छलफल गरेका थिएँ । उनीहरुबाट सकारात्मक प्रतिकृया प्राप्त भएको थियो । तर मलाई साउनको दोस्रो हप्ता प्रहरीले पक्राउ गरेपछि त्यो कार्यक्रम स्थगित हुन पुग्यो । मेरा मोबाइल फोनहरु प्रहरीको कब्जामा पुग्यो । यस क्रममा मलाई हजारौँ व्यक्तिले फोन गरेका रहेछन् । जुन समय मेरो मोबाइल फोन स्वीच अफ् थियो । मोबाइल स्वीच अफ् भएपछि कतिपयले एसएमएस पनि गरेका रहेछन् । एसएमएसमा लेखिएको हुन्थ्यो । कृष्णजी तपाई कहाँ हुनुहुन्छ? एकपटक फोन रिसिभ गर्नुहोस् या फोन गर्नुहोस् । राष्ट्रिय राजनीतिमा तपाईंको अति जरुरी छ । यस्ता हजोरौँ एसएमएसहरु मेरा
मोबाइलमा आइरहेको थियो भने प्रहरी अधिकृतहरुले त्यो एसएमएसहरु हेरिरहेका हुन्थे । मलाई लाग्छ साउनको दोस्रो हप्ता प्रहरीले मलाई पक्राउ नगरेको भए यस समय नेपालको प्रधानमन्त्री मंगोल समुदायको व्यक्ति हुने थियो ।नेपालका ८० प्रतिशत मूलबासी मंगोल समुदायलाई म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भने नेपालमा विदेशी हिन्दू आर्यन बाहुन-क्षेत्रीबाटक हुने अन्तिम प्रधानमन्त्री नै बाबुराम भट्टराई हो । अब भविष्यमा कहिल्यै पनि नेपालको प्रधानमन्त्रीमा बाहुन हुने छैन । डाक्टरहरुको रिपोर्टअनुसार यतिखेर मेरो स्वास्थ्यमा गम्भिर समस्या छ । म बिरामिको कारण घरमानै थलिएर बसेको छु । मैले मेरो बायाँ हात राम्रोसँग चलाउन सकिरहेको छैन र घरमै आराम गरेर बसिरहेको छु । स्वास्थ्य खराब भएर घरमै बस्नुपरे पनि मैले आफ्नो योजनालाई बृहत रुपमा अगाडि बढाइरहेको छु । मेरो स्वास्थ्य पूर्णरुपमा ठीक भएपछि काठमाडौंमा मंगोल समुदायका वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तिहरुको भेला गरी नेपालका ८० प्रतिशत मूलबासी मंगोल समुदायको शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी बनाउने अभियानलाई अगाडि बढाउने छु । यस समय नेपालको सबै मूलबासी मंगोल समुदाय विभिन्न संगठनको नामबाट अधिकार प्राप्तिको लागि आन्दोलनको मैदानमा उत्रिएका छन् ।
पूर्वमा लिम्बुवान र खम्बुवान, मध्ये क्षेत्रमा तामाङसालिङ, तराईमा मधेसी र थरुहट, पश्चिममा तमुवान र मगरातहरुले गरिरहेको सशक्त आन्दोलनले बाहुनवादी राज्यसत्ताको निंद हराम हुन पुगेको छ । अब मूल जरो उखेलिन मात्र बाँकी छ । अब लिम्बुवानमा त्यहाँको प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखहरु लिम्बु समुदायबाट नै हुनेछ । तामाङसालिङमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखहरु तामाङ समुदायबाट नै हुनेछ । तमुवान क्षेत्रका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखहरु तमु समुदायबाट नै हुनेछ । मगरातका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखहरु मगर समुदायबाट नै हुनेछ । थरुहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखहरु थारु समुदायबाट नै हुनेछ । र मधेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखहरु मधेशी समुदायबाट नै हुनेछ । नेपालको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भविष्यमा कुनै बाहुन हुन सक्ने छैन । किनकि यिनीहरुको संस्कार र चरित्र नै सामन्ती किसिमको छ । नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलमा रहेका मंगोल समुदायको सम्बन्ध क्रमशः नङ र मासुको जस्तै हुँदै गइरहेको छ ।
तसर्थ नेपालको मूलबासी मंगोल समुदायले गरिरहेको आन्दोलन विजयको चरम बिन्दुमा पुगिसकेको छ । अब भविष्यमा ८० प्रतिशत मूलबासी मंगोल समुदाय एउटै राजनीतिक पार्टीमा समावेश हुनेछ । त्यो समय नेपालको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश र प्रधान सेनापति लगायतका सबै प्रमुख पदहरुमा मंगोल समुदाय नै हुनेछ । मंगोलसमुदायमा अहिले विकास भइरहेको वृहत् एकताकै कारण बाहुन जातिबाट हुने अन्तिम प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई हुनेछ ।